Zvisingaremi Zvinowoneka Mawiricheya | Karman® Kupeta Wiricheya TV-10
Chiedza chisina kujeka Mawiricheya kazhinji zvinoreva chinhu icho a wiricheya inogona kunge iine, inodonha zvichireva kuti inopetwa wiricheya, kusiyana nezvigaro zvakaomarara zvisingawanzopetwa, izvi zvinosanganisira mitambo Mawiricheya, Basketball Mawiricheya, uye inoshanda Mawiricheya.
Lightweight collapsible Mawiricheya kazhinji vane rakareruka furemu iri yose nechinhu chakapetwa, izvi zvinosanganisira kupeta iyo wiricheya chigaro uye zvinoriumba zvikaita chimiro chakabatana, icho chinogona kuchengetwa mutangi remotokari, kana nzvimbo yekuchengetera semuenzaniso.
Harry Jennings uye ake remara shamwari Herbert Everest, vese vari mainjiniya, vakagadzira yekutanga isingaremi, simbi, kukomoka wiricheya muna 1933. Everest akange atyoka musana mutsaona yemugodhi.
Iyo Yakapetwa Furemu Yakakosha
Chiedza Chinobvaruka Mawiricheya ndiwo maitiro matsva mu wiricheya munharaunda, iro rinopetwa uye rakareruka furemu rave kufarirwa kwazvo ne wiricheya vashandisi vanosarudza kushandisa isina kurema wheelchair izvo zvinogona zvakare kupetwa kuti zvive nyore, uye kusimudzira nguva inotora kuita yako yezuva nezuva maitiro.
Kubatika kunoenderana neshoko rekuti Kupeta, zvinoreva chinhu chimwe chete kana chashandiswa pamberi peshoko rekuti “wiricheya", Furemu yechigaro inopeta, kusanganisira chigaro, dzimwe nguva backrest, foldable tsoka, kana mune dzimwe nguva inodonha kusunda mabara kune muchengeti akafambiswa Mawiricheya.
Karman Healthcare inopa isingaremi inowira Mawiricheya ayo akapetwa uye ane akareruka furemu, isu tinofukidza pamusoro pegumi dzakasiyana zvikamu zve Mawiricheya izvo zvinowira, isu tinopa foldable ergonomic Mawiricheya, chiedza Mawiricheya, Ultra mwenje Mawiricheya, kutakura Mawiricheya, bariatric Mawiricheya, tilting Mawiricheya, recliner Mawiricheya, vana Mawiricheya, uye mureza Mawiricheya izvo zvakapetwa.
Tine anotevera mapoka anosanganisira Lightweight Collapsible Mawiricheya:
Zvinogona kuitika wiricheya mavhiri
Kune mhando nyowani yetekinoroji inozivikanwa se “kukomoka wiricheya mavhiri", Iyo inobvumidza mushandisi kupeta mavhiri avo kunyangwe yakawanda comp-kuita pane yaivapo kare.
The wiricheya irikunguruka mukati mezana ramakumi maviri nemasere nekutenderera kunosungirwa kuwana zvakapetwa zvakapetwa kaviri: mavhiri anotenderera. Morph Wheels, yakagadzirirwa nemurume mumwe chete uyo akagadzira mavhiri akapetwa emabhasikoro, ane mukana wekuita kufamba kwemarudzi ese kushomeka kune chunk yenyika inofungidzirwa mamirioni maviri-pamwe wiricheya vanoshandisa. “Aka ndekekutanga kupetwa wiricheya vhiri, ”anodaro Kathleen Hanek, director wezvekutengesa zvigadzirwa kuMaddak-muridzi weMorph Wheels. "Izvo zvese ndezvekuita kuti zvinhu zvive nyore uye nekuwedzera kuwanikwa kwe wiricheya vanoshandisa. ” Izvo zvakare ndezvekuita mari. Morph Wheels anomira padyo nemucheto wakanakisa we wiricheya mavhiri: $ 950 yeseti yemaviri - inodarika nekaviri inodhura mamwe mavhiri. Uye, ingangoita 7.5 mapaundi imwe neimwe, vanoyera zvakanyanya kudarika zvakajairika 4.5-paundi mavhiri. Iyo yekuwedzera huremu ndeyekuti matai akasimba rabha - hapana mweya - uye nekuti mavhiri anogadzirwa kubva mugirazi-akazara nylon, kwete simbi. Asi, mukutsinhana nehuremu hwakawedzera - uye mutengo wepamusoro-wekupedzisira - vatengi vanowana mukana wemavhiri akapetwa. Zvakare, kusiyana nevazhinji wiricheya mavhiri, aya anowanzo kukwana mumusoro wemabhini pendege. Uye munzvimbo dzakakwenenzverwa dzemotokari nzvimbo - chikomborero kune vamwe vafambi vebhizinesi. "Handisati ndamboona zvakadai," anodaro Bob Vogel, akaremara uye wiricheya mushandisi ari mukuru munyori we New Mobility, iyo magazini inowanikwa neUnited Mumhara Sangano. "Ndinoda zvitsva." Asi, Vogel inowedzera, makumbo akapetwa anogona kungokwezva kumusika we niche. "Handione mushandisi wako wepakati achitora nguva yekupeta vhiri kuti apinde mumotokari," anodaro. "Kana zvichitora mamwe masekondi makumi maviri pagumbo, inguva yakawanda iyoyo." Kupeta mavhiri, iwo anofanira kunge akasununguka kubva pachigaro. Dzakapetwa nekutanga kubvisa ekisero inobata vhiri munzvimbo. Vhiri, chairo, rinotsemuka nepakati kana iwe uchidzvanya mativi ese. Makumbo akapetwa uko akatanga kufungidzirwa muna 20 emabhasikoro nemugadziri weBritish Duncan Fitzsimmons. Mushure mekugamuchira mibvunzo kubva ku wiricheya munharaunda, akazobatana naMaddak uye akagadzirirazve mavhiri ekushandisa Mawiricheya. Iyo kambani yaivimba neboka rinotarisa re wiricheya vashandisi kuti vabatsire iyo kugadzirisa dhizaini. Boka rinotarisa rakaramba richitsvaga kuti riwedzere. "Inotaridzika kunge yakapusa, asi yaive mainjiniya kuuya nezvatinazvo," anodaro Hanek. Iyo dhizaini yakatumidzwa zita repamusoro dhizaini mu kutakura indasitiri muna 2013 neLondon Museum of Design. Mavhiri anouya newaranti yemakore matatu. "Hunyanzvi hwaive hwekugadzira vhiri iro raisangova vhiri rinopeta," anodaro Hanek. "Inoda kuita uye kunzwa senge vhiri chairo kana yabhedhenurwa."
Yekutanga Chinyorwa naBruce Horovitz - USA Nhasi
Unogona kutipa runhare ku 1-626-581-2235
Folding Mawiricheya izvo zvinowira
Pamusoro pezvo, saka zvakakosha kuti urangarire iro rakawanda bhuku Mawiricheya akapeta. Rudzi rwekupeta michina inofanirwa kuve FDA inodzorwa neyakafanira 501k kunyoreswa. Ziva nezve "kutarisa" kunoda kunze uko. Zvimwe zvinogadzirwa hazviite "kutevedzera" iyo "mitemo".
Kunyanya avo vari kunze uko vanopeta kunge chigaro chepamhenderekedzo yegungwa. Ivo zvirokwazvo havasi "VAKACHENGETEKA" uye kana iwe ukatarisa, ivo havana kuisirwa sechigadzirwa chekurapa. Zvese zveKarman Mawiricheya vari. Ingo tarisa iyo documentations. Iwe haungade kuti yako mhuri kana vadiwa vave "vasina kuchengetedzeka". Zvirokwazvo usatenge kubva kukambani yanga isina kumboreba kwenguva yakareba haina kuongororwa mukati memharaunda yekurapa. Hazvina kukosha. Kungofanana iwe waisazove mota yakachipa uye isina kuchengetedzeka, haungaite izvi na Mawiricheya kana.
Yedu TV-10 Kufamba Wiricheya
Zvakare, isu ndisu vepakutanga vagadziri ve pazasi maitiro e foldable wiricheya. Yakagadzirirwa kufamba. Tinokurudzira kutakura mawiricheya uye zvakafanana kana iwe uchitsvaga chimwe chinhu chezvetsika. Kana zvisiri, ndizvozvo.
Nekuda kweizvozvo, isu tanga tine angangoita mashanu mazera eiyi modhi munguva yese yenguva ne "kuumbazve" izvo zvataitoziva kuti zvakashanda zvakanyanya. Usatenge kopi katsi uye usatenge uber anodhura mamodheru anowedzera uyu mutengo. Tenga iyo yekutanga uye uwane mazera uye pamusoro pegumi ramakore rekuvandudza pane izvo zvatinoona seakasarudzika kutakurika foldable kufamba kufamba zvine hushamwari wiricheya.
Chiedza Kupeta Wiricheya
Simba Rinotakurika Wiricheya Rinogona Kuita Kuti Hupenyu Hureruke
YeKunyaradza Shandisa Folding Simba Mawiricheya
Tsvaga Mibvunzo Inomhara Mapeji
Mawiricheya eMota Diki